प्रयोगकर्ता वार्ता:हेमपाल श्रेष्ठ - विकिपिडिया
प्रयोगकर्ता वार्ता:हेमपाल श्रेष्ठ
हेमपाल जी, सर्वप्रथम नेपाली विकिमा स्वागतम् । तपाइको सद्‌भाव र लगान यस् विकिप्रति सदै रहिरहोस् ।
तपाइले हालसालै गरेका योगदानहरु तपाइको विकिप्रतिको Interest दर्साउछ। यसै सन्दर्भमा मलाइ एक दुइ कुरा वाँड्न (Share गर्न) मन लाग्यो । नेपालीमा ह्रस्व र दिर्ध प्रति धेरैले ध्यान दिदैनन् (गलत काम)। खासमा त्यहाँ शुद्दता रहँदैन । त्यसतो बेलामा तपाइ जस्तो प्रयोगकर्ताहरुले सहि मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाइ पुरा विश्वाश छ । जस्तै:
Instead of कानुन' this page should be कानून : Admin Kindly remove this page - हेमपाल श्रेष्ठ
हेमपाल जी, प्रत्येक पृष्ठमा वार्तालाप भन्ने लिङ्क हुन्छ : प्राय माथी पट्टी । त्यसमा आफूलाइ लागेका कुराहरु राख्न सकिन्छ । सुझावहरु त्यहाँ दिनुपर्दछ जुन पछि पनि काम लाग्न सक्छ। त्यो असलि पृष्ठ त समयानुसार परिमार्जित हुदै जान सक्छ । फेरी, लेख पृष्ठमा सुझावहरु वा Text को थुप्रो राख्ने कुरा पनि भएन। वार्तालाप पृष भने Archive गरेर राख्ने चलन छ। त्यसैले वारतालाप पृष्ठ प्रयोग गर्नु धेरै हिसाबमा उचित हुन्छ । साथै यसवाट पछि पछि आउने वा नयाँ व्यक्तिहरुले पुराना गल्तिहरु पनि दोहोर्याउदैनन् । जस्तोकि तपाइकै यो सुझाव पनि अहिले त्यहाँ छैन । तर वार्तालाप भएको भए रहन्थ्यो होला।
अँ by the way, यस्तो कुराहरु विकी चलाउदा चलाउदा आफै आइहाल्छ । धन्ना मान्नु पर्दैन।
एडमिन बन्ने बारेमा[सम्पादन गर्ने]
ए साँच्चै एडमिन बन्न धैरै सजिलो छ। पहिले पहिले विदेशी मात्र एडमिन मात्र थिए नेपाली एडमिनको खाँचो हुने गर्दथ्यो । एडमिन भनेको नामको लागि वा पदको लागी त हैन कामको लागि हो तर पनि सबैजना volunteers हुन् । wiki is designed in suchaway that you don't need to be an admin for any of your desired work. You can do most of the works freely with ease. Just createauser and then start contributing. यदि कुनै पनि नेपाली contribute गर्न आउछन् भने We would be more than happy। पहिले पहिले एक दुइ जना मात्र सक्रिय हुने गर्दथे । अहिले भने धेरै राम्रो छ। विकीलाइ निवेदन दिन Request for admin हुने गर्दछ। शायद त्यो चाहिँ नेपालीमा नभएर English मै हुनु पर्छहोला किनकी विदेशीहरुले वुझ्नुपर्छ। Steward र अरुले हेरिरहेका हुन्छन् । खासमा एडमिन को एडमिन भनेका तिनीहरु हुन् किनकी तिनीहरुले एडमिन दिन र लिन सक्छन् । सानोतिनो तर गहकिलो काम गर्ने मन छ भने meta.wikipedia.org मा Temporary एडमिन मागे पनि हुन्छ। मेटामा सम्पर्क गर्दा सम्वन्धित विकिको diplomatहरु छन् भने(Nepali wiki has diplomats) तिनिहरुलाइ पहिला सम्पर्क गर्नु पर्छ । अँ साच्चै एडमिनको लागी कमसेकम ३-४ जना supporter हरु भए हुन्छ, अनि कमसेकम ३-४ महिनाको experience पनि । विकीको आकार हेरेर एडमिन संख्या थपिन्छ क्यारे । हाम्रो विकि त सानै छ । दिनको ५० एडिट वा दिनको ५ नयाँ लेख पनि हुदैन प्राय:। तर हरेश खानु हुदैन तेपाली विकीलाइ बढाउनु पर्छ। सकेसम्म धेरै प्रयोगकर्ता वनाएर । त्यसपछि सकेसम्म धेरै लेखहरु बनाएर र सकेसम्म धेरै गुणस्तर बनाएर । - धन्यवाद राजेश 10:14,3फेब्रुअरी 2007 (UTC)
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रयोगकर्ता_वार्ता:हेमपाल_श्रेष्ठ&oldid=193430" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:२०, ५ डिसेम्बर २०११ मा परिवर्तन गरिएको थियो।